သား တို့ဖတ်ဖို့ ဖခင်တစ်ဦး၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ – Gentleman Magazine
သား တို့ဖတ်ဖို့ ဖခင်တစ်ဦး၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
သား တို့ဖတျဖို့ ဖခငျတဈဦး၏ အိတျဖှငျ့ပေးစာ
မင်း ကျောင်းမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ မက်ဆေ့ဂ်ျတွေ အပြန်အလှန်ပို့ပြီး ချိန်းတွေ့ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ပြောတယ်နော်။ အဖေ့အနေနဲ့ မင်းကို မေးချင်တာတွေတော့ ရှိတယ်။ မင်း ကောင်မလေးက ဘယ်လိုနေလဲ။ သူမက လှရဲ့လား၊ တော်ရဲ့လား။ သူမက ဘယ်လိုတေးဂီတမျိုး နားထောင်လေ့ရှိလဲ။ သူမက အမေတူသမီးလား စသဖြင့်ပေါ့။
ဒီလိုကြားရတာ အဖေ့အတွက် ကိစ္စတစ်ခုကို အမှတ်ရသွားစေတယ်။ ဒီကိစ္စက ခလုတ်တစ်ခုနဲ့ မတူဘူးလား။ မိန်းကလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ တွေးမိလိုက်တာနဲ့ မင်းအနေနဲ့ သူတို့နားမှာပဲ ရစ်ဝဲနေချင်တော့တာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါနဲ့ အဲဒီခလုတ်က ဘယ်တုန်းက ပွင့်သွားရတာလဲ။ မင်းဘယ်အချိန်က မိန်းကလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားသဘောကျတတ်သွားတာလဲ။
တကယ်တော့ ဒီကိစ္စက ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးပါဘူး။ အခုအရေးကြီးတာက မင်းအနေနဲ့ သူမကိုတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပြုမူသလဲဆိုတာပဲ။
မင်းက အခုမှ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ် သားရေ။ ပြီးတော့ မင်းနဲ့သင့်တော်တဲ့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်မပြုခင်အထိ မိန်းကလေးတွေအများကြီးနဲ့ တွေ့ရဆုံရနိုင်သေးတယ်။ ဒီတော့ မင်းအနေနဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ အမှားတွေမလုပ်မိစေဖို့ အတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်ယောက်ဆီက လေ့လာသင်ယူသင့်တယ်။ ဒီလိုလူမျိုးကို မင်းအဝေးကြီးရှာနေစရာ မလိုပါဘူး။ မင်း အဖေ ငါ ကိုယ်တိုင်မင်းကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီက အကြံဉာဏ်ယူမလို့လား။ မလုပ်နဲ့လေ။ မသိတဲ့လူကို မတတ်တဲ့လူက အကြံပေးသလိုဖြစ်ပြီး ဒုက္ခရောက်မှာ သေချာတယ်။ ဒီတော့ မင်းအဖေ ငါ ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့မိတဲ့ အမှားတွေ မင်း မမှားမိအောင် သိထားသင့်တာတွေကို ပြောပြမယ်။
ဘာကို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်မလဲ ?
မင်းထက် သာတဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကို ရှာပါ။ တကယ်တော့ ဒီကိစ္စက လွယ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သူမရဲ့အလှအပတစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပဲ သူမရဲ့ ဦးနှောက်၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဘယ်လိုဆက်ဆံတတ်သလဲဆိုတာတွေကို ကြည့်ပြီး မင်း နှစ်သက်မြတ်နိုးရသူကို ရှာဖို့ပါပဲ။
မင်းထက် သာ တဲ့တစ်ယောက်ယောက်ကို မင်းတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ မင်းကိုယ်တိုင်လည်း သူမအနားမှာ ရှိနေချိန်မှာ ပိုတော်တဲ့လူတစ်ယောက် အလိုလိုဖြစ်ချင်လာမှာ သေချာတယ်။ သူမအတွက် ပိုတော်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း မင်းကိုယ်မင်းတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
အခြားကိစ္စတွေက သိပ်တော့အရေးမကြီးပါဘူး။ သူမ ဘာလူမျိုးလဲ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ၊ Instagram မှာ Like ဘယ်လောက်များများရလဲ၊ သူမရဲ့ လူမှုရေးအခြေအနေနဲ့ ဘာသာရေးအထိ သိပ်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းကိုယ်မင်း မေးရမယ့် မေးခွန်းတစ်ခုက ဒီကောင်မလေးက ငါ့ကို ပိုတော်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်စေနိုင်သလား ဆိုတာပဲ။ အဖြေက Yes ဆိုရင်တော့ မင်းနဲ့ သင့်တော်သူကို တွေ့ပြီလို့ ဆိုနိုင်တယ်။
ဘယ်လို ပြုမူဆက်ဆံမလဲ (ဆောင်ရန်များ)
လူကြီးလူကောင်းဆန်ဖို့လိုတယ် သား ရေ။ မင်းအမြဲတမ်း မြင်နေတွေ့နေကျကိစ္စတွေပါပဲကွာ။ တံခါးဖွင့်ပေးတာ၊ ပစ္စည်းတွေ ၀ိုင်းသယ်ပေးတာ၊ ထိုင်ဖို့ ခုံပြင်ပေးတာ၊ အေးနေတဲ့အချိန်မှာ အပေါ်အင်္ကျီခြုံပေးတာ စသဖြင့် အားလုံးပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့ခေတ်မှာ တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ ကိစ္စတချို့လည်း ရှိနေတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ –
၁။ စားသောက်ဆိုင်မှာ သူမက အရင်မှာခွင့်ပေးပါ။ သူမ မှာထားတာရောက်လာတဲ့အထိ မင်းမစားပဲနေပါ။
၂။ သူမ ဘယ်လောက်လှလဲဆိုတာကို ပြောပေးပါ။
၃။ သူမရဲ့ မိဘတွေရှေ့မှာ လေးစားသမှုနဲ့နေပါ။ လေးစားခံရအောင် နေပါ။ ရိုရိုသေသေပြောဆို ဆက်ဆံပါ။
၄။ သူမရဲ့ မိဘတွေအနားမှာမရှိရင်တောင် သူတို့ကို အရိုအသေမတန်ပါစေနဲ့။ သူမကိုယ်တိုင်က မိဘတွေကို စိတ်ဆိုးနေရင်တောင် မင်းရဲ့လေးစားမှုကို ဆက်ထိန်းထားပါ။
၅။ ဘာအကြောင်းမှမရှိပဲနဲ့လည်း သူမကို အံ့သြပျော်ရွှင်ရအောင် ဖန်တီးပေးပါ။ ဥပမာ – ပန်းစည်းဝယ်ပေး တာလိုမျိုးပေါ့။
၆။ သူမ နေအိမ်ကို ဘေးကင်းကင်းနဲ့ ပြန်ရောက်အောင် လိုက်ပို့ပေးပါ။
၇။ သူမနဲ့ အတူလမ်းလျှောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာ ပလက်ဖောင်းအပြင်ဘက် လမ်းဘက်ခြမ်းကနေလျှောက်ပါ။
၈။ သူမ ရယ်မောပျော်ရွှင်ရအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
နောက်ထပ် တကယ့်ကို အရေးကြီးတာတွေကတော့ –
၉။ သူမကို အမြင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်အောင် အားပေးပါ။
၁၀။ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို ကြိုးစားစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ စိန်ခေါ်ပါ။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ သူမရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်လာစေနိုင်တယ်လေ။
၁၁။ သူမရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လေးလေးစားစားနဲ့ စဉ်းစားပေးပါ။
အခုပြောတဲ့အချက်တွေထဲက (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို မင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် သူမက မင်းကို ချစ်မှာသေချာတယ်။ (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ မင်းကို ချစ်ရုံမက ယုံကြည်ကိုးစားလာမှာ သေချာတယ်။
ဘယ်လို ပြုမူဆက်ဆံမလဲ (ရှောင်ရန်များ)
မလုပ်ပဲရှောင်ရှားရမယ့် ကိစ္စတွေကတော့ –
၁။ အရမ်းအစအနောက်မလွန်ပါစေနဲ့။ မင်းကောင်မလေးကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့မှ ထိခိုက်နာကျဉ်ရလောက်တဲ့ အထိ မစမနောက်ပါနဲ့။ YouTube ပေါ်မှာ ဒီလိုစနောက်တာမျိုးတွေကို မင်းတွေ့ရင်တွေ့လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းလိုက်မလုပ်နဲ့လို့ အကြံပေးချင်တယ်။
၂။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လေလည်တာမျိုးလည်း မလုပ်ပါနဲ့။ အပေါင်းအသင်းတွေ အချင်းချင်းစနောက်ရင်းနဲ့ တစ်ယောက်လေလည်တဲ့အနံ့ကို ရှုခိုင်းစေတာမျိုး မလုပ်မိပါစေနဲ့။ ဒီကိစ္စက အရိုအသေတန်စေတယ်။
၃။ ဘာသာရေးကို ထိပါစော်ကားတာမျိုးလည်း ရှောင်ပါ။ မင်းကောင်မလေး ဒါမှမဟုတ် သူမရဲ့မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ဘာသာရေးအရတိုက်ခိုက်စော်ကားတာမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ သူမ ရှေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ကွယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် မလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးပတယ်။
၄။ ကတိမပျက်ပါစေနဲ့။ တစ်နေရာရာသွားပြီး တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ပြောထားရင် သေချာပေါက်လုပ်ပါ။ ကတိမပျက်ပါစေနဲ့။ မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်စကားကိုယ် တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားကောင်းတွေကိုပဲ သဘောကျတတ်တယ်။
၅။ ဖုန်းကိုလည်း ကလိမနေပါနဲ့ ။ သူမနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာ မင်းမျက်လုံးတွေက သူမဆီမှာပဲ ရှိနေရမှာ။ ဖုန်းကို အာရုံရောက်နေရမှာ မဟုတ်ဘူး။
၆။ လိမ်ညာဖုံးကွယ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ အမှားတစ်ခုခုလုပ်မိရင် ၀န်ခံလိုက်ပါ။ အမှန်ကို ပြင်ပါ။ အမှားကို ၀န်ခံပြီး အမှန်ကို ပြင်နိုင်ရင် သူမဘက်က ခွင့်လွှတ်ပေးမှာ သေချာပါတယ်။
၇။ အရှက်ရအောင် အထင်အမြင်သေးတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ မင်းလိုပဲ သူမလည်း အမှားလုပ်မိနိုင်တယ်။ ဒီအခါမှာ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်ဖို့ လိုတယ်။ အညှိုးအတေးထားပြီး အရှက်ရစရာဖြစ်အောင် အထင်သေးအမြင်သေး ဆက်ဆံတာမျိုးတွေ လုံးဝမရှိသင့်ဘူး။
၈။ တခြားလူတွေအကြောင်း အတင်းမပြောနဲ့။ သူမက ပြောလာရင်တောင် နားပဲထောင်ပေးလိုက်ပါ။ ၀င်မပြောပါနဲ့။ ဒီလို သူများအကြောင်း မပြောဖို့လည်း မတားပါနဲ့။ သူမပြောတာကို အသိအမှတ်ပြု နားထောင်ပေးရင် လုံလောက်ပါပြီ။ ပထမပိုင်းတော့ မင်းကို စိတ်ဆိုးချင်ဆိုးလိမ့်မယ်။ ရေရှည်မှာတော့ မင်းကို လေးစားစရာကောင်းတယ်လို့ မြင်လာလိမ့်မယ်။
အခုလက်ရှိ မင်းရဲ့ ရည်းစားကောင်မလေးက မင်းရဲ့ အိမ်သူဇနီးမယားဖြစ်လာမယ်လို့ တထစ်ချပြောလို့ မရနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုလိုကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဆီက အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ ဘ၀တစ်သက်လုံး လက်တွဲသွားလို့ရမယ့် ဆက်ဆံရေးမျိုးကို တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မယ်။
အချစ်ဆိုတာ သည်းခံကြင်နာတတ်ရတယ်။ အချစ်မှာ မလိုမုန်းထားမှုတွေ ရိုင်းစိုင်းမှုတွေ မရှိဘူး။ အချစ်က အမှားတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နေဖို့ထက် အမှန်တရားနဲ့ ကျေနပ်နေနိုင်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောချင်တယ် သားရေ။
မငျး ကြောငျးမှာ ကောငျမလေးတဈယောကျနဲ့ မကျဆဂျေ့တြှေ အပွနျအလှနျပို့ပွီး ခြိနျးတှဖေို့ စီစဉျနတေယျလို့ ပွောတယျနျော။ အဖအေ့နနေဲ့ မငျးကို မေးခငျြတာတှတေော့ ရှိတယျ။ မငျး ကောငျမလေးက ဘယျလိုနလေဲ။ သူမက လှရဲ့လား၊ တျောရဲ့လား။ သူမက ဘယျလိုတေးဂီတမြိုး နားထောငျလရှေိ့လဲ။ သူမက အမတေူသမီးလား စသဖွငျ့ပေါ့။
ဒီလိုကွားရတာ အဖအေ့တှကျ ကိစ်စတဈခုကို အမှတျရသှားစတေယျ။ ဒီကိစ်စက ခလုတျတဈခုနဲ့ မတူဘူးလား။ မိနျးကလေးတှကေ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတယျလို့ တှေးမိလိုကျတာနဲ့ မငျးအနနေဲ့ သူတို့နားမှာပဲ ရဈဝဲနခေငျြတော့တာပဲ မဟုတျလား။ ဒါနဲ့ အဲဒီခလုတျက ဘယျတုနျးက ပှငျ့သှားရတာလဲ။ မငျးဘယျအခြိနျက မိနျးကလေးတှကေို စိတျဝငျစားသဘောကတြတျသှားတာလဲ။
တကယျတော့ ဒီကိစ်စက ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဘယျအခြိနျမှာပဲဖွဈဖွဈ အရေးမကွီးပါဘူး။ အခုအရေးကွီးတာက မငျးအနနေဲ့ သူမကိုတှပွေီ့းတဲ့အခါမှာ ဘယျလိုပွုမူသလဲဆိုတာပဲ။
မငျးက အခုမှ ဆယျကြျောသကျအရှယျပဲရှိသေးတယျ သားရေ။ ပွီးတော့ မငျးနဲ့သငျ့တျောတဲ့ တဈယောကျယောကျနဲ့ အိမျထောငျမပွုခငျအထိ မိနျးကလေးတှအေမြားကွီးနဲ့ တှရေ့ဆုံရနိုငျသေးတယျ။ ဒီတော့ မငျးအနနေဲ့ မိနျးကလေးတှနေဲ့ ဆကျဆံရာမှာ အမှားတှမေလုပျမိစဖေို့ အတှအေ့ကွုံရှိ ကြှမျးကငျြသူ တဈယောကျယောကျဆီက လလေ့ာသငျယူသငျ့တယျ။ ဒီလိုလူမြိုးကို မငျးအဝေးကွီးရှာနစေရာ မလိုပါဘူး။ မငျး အဖေ ငါ ကိုယျတိုငျမငျးကို လမျးညှနျပေးနိုငျပါတယျ။
မငျးရဲ့ သူငယျခငျြးတှဆေီက အကွံဉာဏျယူမလို့လား။ မလုပျနဲ့လေ။ မသိတဲ့လူကို မတတျတဲ့လူက အကွံပေးသလိုဖွဈပွီး ဒုက်ခရောကျမှာ သခြောတယျ။ ဒီတော့ မငျးအဖေ ငါ ကိုယျတိုငျလုပျခဲ့မိတဲ့ အမှားတှေ မငျး မမှားမိအောငျ သိထားသငျ့တာတှကေို ပွောပွမယျ။
ဘာကို ကွညျ့ပွီး ရှေးခယျြမလဲ ?
မငျးထကျ သာတဲ့တဈယောကျယောကျကို ရှာပါ။ တကယျတော့ ဒီကိစ်စက လှယျပါတယျ။ မိနျးကလေးတဈယောကျကို သူမရဲ့အလှအပတဈခုတညျးကွောငျ့ မဟုတျပဲ သူမရဲ့ ဦးနှောကျ၊ စိတျနစေိတျထား၊ မိသားစုနဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို ဘယျလိုဆကျဆံတတျသလဲဆိုတာတှကေို ကွညျ့ပွီး မငျး နှဈသကျမွတျနိုးရသူကို ရှာဖို့ပါပဲ။
မငျးထကျ သာ တဲ့တဈယောကျယောကျကို မငျးတှပွေီ့ဆိုတာနဲ့ မငျးကိုယျတိုငျလညျး သူမအနားမှာ ရှိနခြေိနျမှာ ပိုတျောတဲ့လူတဈယောကျ အလိုလိုဖွဈခငျြလာမှာ သခြောတယျ။ သူမအတှကျ ပိုတျောတဲ့လူတဈယောကျဖွဈဖို့ ကွိုးစားရငျး မငျးကိုယျမငျးတိုးတကျအောငျ လုပျဆောငျပွီးသားဖွဈသှားလိမျ့မယျ။
အခွားကိစ်စတှကေ သိပျတော့အရေးမကွီးပါဘူး။ သူမ ဘာလူမြိုးလဲ၊ သူငယျခငျြးမိတျဆှေ ဘယျနှဈယောကျရှိလဲ၊ Instagram မှာ Like ဘယျလောကျမြားမြားရလဲ၊ သူမရဲ့ လူမှုရေးအခွအေနနေဲ့ ဘာသာရေးအထိ သိပျအရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စတှေ မဟုတျပါဘူး။ မငျးကိုယျမငျး မေးရမယျ့ မေးခှနျးတဈခုက ဒီကောငျမလေးက ငါ့ကို ပိုတျောတဲ့လူတဈယောကျဖွဈစနေိုငျသလား ဆိုတာပဲ။ အဖွကေ Yes ဆိုရငျတော့ မငျးနဲ့ သငျ့တျောသူကို တှပွေီ့လို့ ဆိုနိုငျတယျ။
ဘယျလို ပွုမူဆကျဆံမလဲ (ဆောငျရနျမြား)
လူကွီးလူကောငျးဆနျဖို့လိုတယျ သား ရေ။ မငျးအမွဲတမျး မွငျနတှေနေ့ကေကြိစ်စတှပေါပဲကှာ။ တံခါးဖှငျ့ပေးတာ၊ ပစ်စညျးတှေ ဝိုငျးသယျပေးတာ၊ ထိုငျဖို့ ခုံပွငျပေးတာ၊ အေးနတေဲ့အခြိနျမှာ အပျေါအင်ျကြီခွုံပေးတာ စသဖွငျ့ အားလုံးပဲပေါ့။ ဒါပမေယျ့ မငျးတို့ခတျေမှာ တိမျမွုပျပြောကျကှယျနတေဲ့ ကိစ်စတခြို့လညျး ရှိနတေယျ။ အဲဒါတှကေတော့ –
၁။ စားသောကျဆိုငျမှာ သူမက အရငျမှာခှငျ့ပေးပါ။ သူမ မှာထားတာရောကျလာတဲ့အထိ မငျးမစားပဲနပေါ။
၂။ သူမ ဘယျလောကျလှလဲဆိုတာကို ပွောပေးပါ။
၃။ သူမရဲ့ မိဘတှရှေမှေ့ာ လေးစားသမှုနဲ့နပေါ။ လေးစားခံရအောငျ နပေါ။ ရိုရိုသသေပွေောဆို ဆကျဆံပါ။
၄။ သူမရဲ့ မိဘတှအေနားမှာမရှိရငျတောငျ သူတို့ကို အရိုအသမေတနျပါစနေဲ့။ သူမကိုယျတိုငျက မိဘတှကေို စိတျဆိုးနရေငျတောငျ မငျးရဲ့လေးစားမှုကို ဆကျထိနျးထားပါ။
၅။ ဘာအကွောငျးမှမရှိပဲနဲ့လညျး သူမကို အံ့ဩပြျောရှငျရအောငျ ဖနျတီးပေးပါ။ ဥပမာ – ပနျးစညျးဝယျပေး တာလိုမြိုးပေါ့။
၆။ သူမ နအေိမျကို ဘေးကငျးကငျးနဲ့ ပွနျရောကျအောငျ လိုကျပို့ပေးပါ။
၇။ သူမနဲ့ အတူလမျးလြှောကျတဲ့အခါတိုငျးမှာ ပလကျဖောငျးအပွငျဘကျ လမျးဘကျခွမျးကနလြှေောကျပါ။
၈။ သူမ ရယျမောပြျောရှငျရအောငျ လုပျဆောငျပါ။
နောကျထပျ တကယျ့ကို အရေးကွီးတာတှကေတော့ –
၉။ သူမကို အမွငျ့ကိုတကျလှမျးနိုငျအောငျ အားပေးပါ။
၁၀။ အတှအေ့ကွုံသဈတှကေို ကွိုးစားစမျးသပျကွညျ့ဖို့ စိနျချေါပါ။ ဒီနညျးလမျးနဲ့ သူမရဲ့ တဈကိုယျရညျစှမျးရညျကို တိုးတကျလာစနေိုငျတယျလေ။
၁၁။ သူမရဲ့ ထငျမွငျယူဆခကျြနဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို လေးလေးစားစားနဲ့ စဉျးစားပေးပါ။
အခုပွောတဲ့အခကျြတှထေဲက (၈၀)ရာခိုငျနှုနျးလောကျကို မငျးလုပျနိုငျမယျဆိုရငျ သူမက မငျးကို ခဈြမှာသခြောတယျ။ (၁၀၀)ရာခိုငျနှုနျးလုပျနိုငျမယျဆိုရငျတော့ မငျးကို ခဈြရုံမက ယုံကွညျကိုးစားလာမှာ သခြောတယျ။
ဘယျလို ပွုမူဆကျဆံမလဲ (ရှောငျရနျမြား)
မလုပျပဲရှောငျရှားရမယျ့ ကိစ်စတှကေတော့ –
၁။ အရမျးအစအနောကျမလှနျပါစနေဲ့။ မငျးကောငျမလေးကို ဘယျလိုနညျးလမျးနဲ့မှ ထိခိုကျနာကဉျြရလောကျတဲ့ အထိ မစမနောကျပါနဲ့။ YouTube ပျေါမှာ ဒီလိုစနောကျတာမြိုးတှကေို မငျးတှရေ့ငျတှလေိ့မျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ မငျးလိုကျမလုပျနဲ့လို့ အကွံပေးခငျြတယျ။
၂။ ရညျရှယျခကျြရှိရှိနဲ့ လလေညျတာမြိုးလညျး မလုပျပါနဲ့။ အပေါငျးအသငျးတှေ အခငျြးခငျြးစနောကျရငျးနဲ့ တဈယောကျလလေညျတဲ့အနံ့ကို ရှုခိုငျးစတောမြိုး မလုပျမိပါစနေဲ့။ ဒီကိစ်စက အရိုအသတေနျစတေယျ။
၃။ ဘာသာရေးကို ထိပါစျောကားတာမြိုးလညျး ရှောငျပါ။ မငျးကောငျမလေး ဒါမှမဟုတျ သူမရဲ့မိသားစု၊ သူငယျခငျြးတှကေို ဘာသာရေးအရတိုကျခိုကျစျောကားတာမြိုးတှေ မလုပျပါနဲ့။ သူမ ရှမှေ့ာပဲဖွဈဖွဈ နောကျကှယျမှာပဲဖွဈဖွဈ မလုပျမိဖို့ အရေးကွီးပတယျ။
၄။ ကတိမပကျြပါစနေဲ့။ တဈနရောရာသှားပွီး တဈခုခုလုပျဖို့ ပွောထားရငျ သခြောပေါကျလုပျပါ။ ကတိမပကျြပါစနေဲ့။ မိနျးကလေးတှကေ ကိုယျ့စကားကိုယျ တနျဖိုးထားတတျတဲ့ ယောင်ျကြားကောငျးတှကေိုပဲ သဘောကတြတျတယျ။
၅။ ဖုနျးကိုလညျး ကလိမနပေါနဲ့ ။ သူမနဲ့အတူရှိနတေဲ့အခြိနျမှာ မငျးမကျြလုံးတှကေ သူမဆီမှာပဲ ရှိနရေမှာ။ ဖုနျးကို အာရုံရောကျနရေမှာ မဟုတျဘူး။
၆။ လိမျညာဖုံးကှယျတာမြိုး မလုပျပါနဲ့။ အမှားတဈခုခုလုပျမိရငျ ဝနျခံလိုကျပါ။ အမှနျကို ပွငျပါ။ အမှားကို ဝနျခံပွီး အမှနျကို ပွငျနိုငျရငျ သူမဘကျက ခှငျ့လှတျပေးမှာ သခြောပါတယျ။
၇။ အရှကျရအောငျ အထငျအမွငျသေးတာမြိုး မလုပျပါနဲ့။ မငျးလိုပဲ သူမလညျး အမှားလုပျမိနိုငျတယျ။ ဒီအခါမှာ နားလညျခှငျ့လှတျပေးတတျဖို့ လိုတယျ။ အညှိုးအတေးထားပွီး အရှကျရစရာဖွဈအောငျ အထငျသေးအမွငျသေး ဆကျဆံတာမြိုးတှေ လုံးဝမရှိသငျ့ဘူး။
၈။ တခွားလူတှအေကွောငျး အတငျးမပွောနဲ့။ သူမက ပွောလာရငျတောငျ နားပဲထောငျပေးလိုကျပါ။ ဝငျမပွောပါနဲ့။ ဒီလို သူမြားအကွောငျး မပွောဖို့လညျး မတားပါနဲ့။ သူမပွောတာကို အသိအမှတျပွု နားထောငျပေးရငျ လုံလောကျပါပွီ။ ပထမပိုငျးတော့ မငျးကို စိတျဆိုးခငျြဆိုးလိမျ့မယျ။ ရရှေညျမှာတော့ မငျးကို လေးစားစရာကောငျးတယျလို့ မွငျလာလိမျ့မယျ။
အခုလကျရှိ မငျးရဲ့ ရညျးစားကောငျမလေးက မငျးရဲ့ အိမျသူဇနီးမယားဖွဈလာမယျလို့ တထဈခပြွောလို့ မရနိုငျဘူး။ ဒါပမေယျ့ အခုလိုကြှမျးကငျြသူတဈယောကျဆီက အကွံဉာဏျတှနေဲ့ဆိုရငျတော့ ဘဝတဈသကျလုံး လကျတှဲသှားလို့ရမယျ့ ဆကျဆံရေးမြိုးကို တညျဆောကျနိုငျလိမျ့မယျ။
အခဈြဆိုတာ သညျးခံကွငျနာတတျရတယျ။ အခဈြမှာ မလိုမုနျးထားမှုတှေ ရိုငျးစိုငျးမှုတှေ မရှိဘူး။ အခဈြက အမှားတှနေဲ့ ပြျောရှငျနဖေို့ထကျ အမှနျတရားနဲ့ ကနြေပျနနေိုငျဖို့ လိုတယျလို့ ပွောခငျြတယျ သားရေ။
Previous: သိမ်ငယ်စိတ်တွေကို ဖြေဖျောက်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၅)ခု
Next: ဆော့ခရေးတီး၏ စကားစစ်နည်း (၃)ခု